Easy Pepper Steak - Iiresiphi
Oku kumnandi Iresiphi yePepper Steak sisidlo saseTshayina saseMelika onokuthi usenze lula ekhaya ngemizuzu engama-30 okanye ngaphantsi.
I-Pepper Steak yindlela ekhawulezayo kwaye elula. Nanini na xa ufuna ukutya okukhawulezayo, le recipe yinto ekhethekileyo. Yenziwe ngemicu yenyama yenkomo enejusi, iphekwe kwisosi encangathi enepepile yentsimbi eswiti kwaye ihanjiswa kakuhle. irayisi , ipasta okanye nje a isaladi elula ecaleni.
I-Pepper Steak yethu esiyithandayo
Xa unezinto eziliwaka zokuzijuba ngokuhlwa, isidlo esinzima siphuma ezincwadini. Le Pepper Steak elula ilungile ngaphantsi kwemizuzu engama-30, izitya ezincinci zokucoca kunye nesidlo esifudumele, esimnandi etafileni. Ukuba unexesha lokuhambisa inyama yenkomo kwangaphambili, nokuba ngcono!
Uyenza njani iPepper Steak
Ukuba uyazibuza ukuba wenza njani i-beef pepper steak, siyipheka kwisitofu kwipani enye! Esi sisidlo esiqhotsiweyo esenziwe ngenyama yenkomo esikiweyo engqukuva nepepile ezisikiweyo. Iphekwe kwi-sauce ye-pepper steak edla ngokujiya nge-cornstarch.
Yintoni oyifunayo ukwenza le nyama yenkomo iqhotse
Inyama yenkomo – iPepper Steak iqhele ukwenziwa ngenyama yenkomo engqukuva ephezulu ekufuneka uyinqumle ibe yimicu ngokuchasene neenkozo.
I-Bell Peppers - iresiphi ngokuqhelekileyo yenziwe ngepepper eluhlaza, ungasebenzisa kwakhona obomvu, ophuzi okanye orenji.
I-Sauce - ukuba ube ne-sauce enencasa kakhulu kwaye imnandi, sebenzisa igalikhi entsha egayiweyo kunye nejinja. Kananjalo, uya kufuna i-soy sauce, i-Worcestershire sauce, Ukufa kunye nobusi okanye iswekile ukongeza ubumnandi.
I-Red Pepper Flakes - yongeza ngaphezulu okanye ngaphantsi, kuxhomekeke kwindlela othanda ngayo ukutya kwakho okubabayo.
I-Cornstarch - i-cornstarch kunye namanzi yongezwa kwi-sauce ukuyiqinisa.
I-anyanisi eluhlaza kunye nembewu yeesame - ilungele ukuhlobisa isitya ngaphambi kokukhonza.
Yintoni esikiweyo yiPepper Steak iqhotsa?
I-recipe inokwenziwa nge-flank steak, i-sirloin, okanye i-top round steak. Ukuba uyinqumle ngendlela efanayo nengqolowa, inyama iya kuphuma inzima. Ngelixa ukuba uyinqumle ngokuchasene nengqolowa, unciphisa imicu ye-muscle, ebangela ukuba inyama ithambile.
Izithako onokuthi ube nazo xa usenza iPepper Steak Stir-fry:
I-Sauce ye-Soy eKhanya - ukuba unomdla kwityuwa, njengoko i-soy sauce eqhelekileyo inokwenza isitya sibe netyuwa kakhulu.
IMirin – yiwayini yaseJapan eswiti yerayisi, ukuba awunayo esandleni ungenza uhlobo olufanayo ngokudibanisa amacephe ama-2 eswekile kunye ne-1/2 yekomityi yewayini emhlophe (njengevermouth okanye isherry eyomileyo) ukuze ubuyisele i-1/2. indebe ye-mirin.
I-Cornstarch - ifumaneka ngokubanzi kwiivenkile ezinkulu. Ukuba ujonge indawo entsha, i-tapioca okanye i-arrowroot powder zezinye iindlela ezilungileyo.
Iimbono ezingakumbi zokuQhotsa ngokukhawuleza
Easy Pepper Chicken Gxuma Qhotsa
I-Shrimp Stir Fry nge-Zucchini Noodles -ICarb ephantsi!
Inkukhu kunye neBrokholi Gxuma Qhotsa -Intandokazi yosapho!
Ixesha lokulungiselela10 imizuzu Ixesha LokuphekaShumi elinantlanu imizuzu Ixesha elipheleleyo25 imizuzu Iinkonzo4 iinkonzo UmbhaliUCatherine Castravet Le iresiphi imnandi ye-One Pan Pepper Steak sisidlo saseTshayina saseMelika saseMelika onokuthi usenze lula ekhaya ngemizuzu nje engama-30 okanye ngaphantsi.
▢Nye iponti phezulu inyama yenkomo isikwe ibe yimicu ngokuchasene neenkozo
▢Mbini amacephe i-canola okanye ioli yemifuno
▢Nye itswele elikhulu yasikwa kancinci
▢Nye intsimbi eluhlaza pepper i-cored kwaye yanqunyulwa
▢Nye orenji okanye intsimbi ebomvu intsimbi, i-cored kwaye inqunyulwe
▢¾ indebe amanzi
▢3 amacephe ndingumngcunube
▢Nye icephe I-sauce yaseWorcestershire
▢Nye icephe Ukufa
▢Nye icephe igalikhi igayiwe
▢Nye icephe ijinja igayiwe
▢¼ icephe iiflakes ipepile ebomvu
▢¼ indebe ubusi okanye iswekile yommoba
▢Mbini amacephe cornstarch
▢itswele eliluhlaza elisikiwe
Yongeza zonke izithako ze-sauce kwisitya esiphakathi kwaye ugxobhoze ukudibanisa. Bekela ecaleni.
Ukuba unexesha lokuhamba ngenyama yenkomo kwiiyure ezimbalwa, gcoba zonke izithako ze-sauce ngaphandle kwe-cornstarch. Yongeza imicu yenkomo kwisikhwama sefriji kwaye uthele i-marinade phezu kwayo. Faka efrijini ukuya kwiiyure ezingama-24. Xa ulungele ukupheka, susa inyama yenkomo kwi-marinade, yongeza ulwelo kwisitya kwaye ugxobhoze kwi-cornstarch.
Fudumeza i-cast iron skillet okanye i-wok phezu kobushushu obuphezulu kwaye ungeze iipunipoli ezi-2 zeoli.
Xa ioli ishushu, yongeza itswele elisikiweyo kunye nepepile kwaye ugxobhoze-gazinga malunga nemizuzu emi-5, okanye de kube ithenda. Dlulisa kwipleyiti xa ugqibile.
Yongeza inyama yenkomo kwi-skillet kwaye usasaze ngokulinganayo, upheke malunga nomzuzu we-1 ungashukumi, ukuze ufumane ukukhangela okuhle kuyo. Gcoba inyama yenkomo kwaye uqhubeke upheka de kube sekupheleni, nje 2-3 imizuzu eyongezelelweyo.
Nciphisa ubushushu phakathi kwaye wongeze i-anyanisi kunye nepelepele kwi-skillet. Gcoba i-sauce kwaye uyifake kwi-skillet.
Gxuma ukudibanisa zonke izithako kwaye upheke malunga nemizuzu emi-2-3 okanye de i-sauce ikhule. Gxuma rhoqo.
Susa ekushiseni kwaye uhombise nge-anyanisi eluhlaza kunye nembewu yesesame ukuba unqwenela.
Imilinganiselo yeZondlo ayibandakanyi izithako ozikhethelayo okanye ukuhombisa.
Iikhalori:398,Iicarbohydrates:31g,Iprotheyini:33g,Amafutha:Shumi elinantlanug,Amafutha aGqithisiweyo:8g,ICholesterol:88mg,Isodium:878mg,Potassium:480mg,Ifayibha:Nyeg,Iswekile:22g,IVithamin A:1080IU,Ivithamin C:65.1mg,Ikhalsiyam:27mg,Iayini:3.6mg
IkhosiIsidlo sakusihlwa, iKhosi ePhambili UkutyaAmerican, Asian Fusion, Chinese© SpendWithPennies.com. Umxholo kunye neefoto zikhuselwe kwilungelo lokushicilela. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa kwaye kuyaxatyiswa. Ukukopa kunye / okanye ukuncamathisela iiresiphi ezipheleleyo kuyo nayiphi na imidiya yoluntu akuvumelekanga ngokungqongqo. .
EZINGAKUMBI IIREPHI OYA KUZITHANDA
Imbiza ekhawulezileyo yenkomo yaseMongolia
Ipani enye Encangathi yenkomo yeOrenji
Iipet Tips Imitshato Imiboniso Yesilayidi Idayimani Iziseko Iivithamini In Food Izixhobo Zeski Izixhobo
ukudlala ubundlobongela bosapho kwi-intanethi simahla
iringi etshintsha umbala kunye nomoya
Owona mbala weenwele ungwevu unenkani
I-bezel isete iindibano zokuzibandakanya kunye neengozi
indlela yokunika i-toast emtshatweni
uvelwano amanqaku okuphulukana notata